JUNE&MAY: သမီးလေး အကြောင်း
Posted by JuneOne at 1:29 AM
I love both. When I visit to Sg, I hope I will haveachance to meet them.
JuneOne October 8, 2012 at 12:33 PM
Rita October 8, 2012 at 9:01 AM
အရင်က မိန်းကလေးတွေဆို သိပ်မချစ်ဘူး။ မေတို့ မှုံတို့နဲ့တွေ့မှ...
JuneOne October 8, 2012 at 12:32 PM
အိမ်ကအတူနေ အကို၊အမ ဆို မေ မှမေပဲ။သူက သွက်တယ်။စကားလေးနဲ့စားတတ်တယ်။ကိုယ်တောင် သူ့ဖက်ပါချင်ချင်။edwin က လူမှုရေးသိပ်မကောင်း ဘာသိဘာသာဆိုတော့....ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်သားပဲ။သူ့ပါးပါး ကတော့ သူ့သမီးကို ကြီးလာရင် ဘယ်လိုထိမ်းရမယ်မသိလို့ အမေလက်အပ်နေတယ်။
မေ့ အကြောင်း မှုံမှုံ့အဖေကို ဖတ်ပြနေတာ..။
သူ့ကလေးတွေက ၂ ယောက်လုံး ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်..တဲ့.. သူက...။
မေက ဥာဏ်လည်းကောင်းတယ်.. မှုံမှုံအခု ၁၉ လ ထဲမှာ မေ ၁၉ လတုံးက သိသလောက် မသိသေးဘူး..။
မှုံလည်း အခုလတွေအတွင်း အရမ်း စိတ်ကောက်တတ်နေတယ်..။ စိတ်ကောက်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် ပစ်လှဲချတာ.. ဒါမယ့် သူက လှဲမချခင် ကြမ်းကို အရင် ရှင်းလိုက်သေးတယ်..(သူ့ကြည့်ပြီး ကျိတ် ရီနေရတယ်..) ။
ကောက်လွန်းလို့ တခါတလေ အကျင့်ပါမှာစိုးလို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရတယ်...။
JuneOne October 8, 2012 at 12:26 PM
မေ ကဥာဏ်ကာင်းတယ်မမ။number တွေဆိုလဲ ၁ ကနေ ၁၀ ကို ၂နှစ်မပြည့်ခင်ကတည်းက အကုန်သိတယ်။သူ့ကို ဘယ်သူမှ သင်မပေးဘူး။အကို လုပ်သူ ဖတ်နေတာတွေ ကြည့်ပြီးတတ်နေတာ။မြန်မာပြည်ကို မတ်လက ၂နှစ်မပြည့်ခင်ပြန်တုန်းက သူ အေဘီစီ အကုန်သိနေလို့။အနားကလူတွေ သူ့ကို အေဘီစီ လာလာမေးကြတယ်။သူ zero နဲ့ အို ကိုဘယ်လိုမေးမေး ကွဲတယ်။
စိတ်ကောက်တာကတော့ အခုနောက်ပိုင်း စိပ်လာတယ်။မိန်းကလေးမို့လာမသိဘူးနော်။edwin စိတ်မကောက်တတ်ဘူး။မှုံလေးက စိတ်မကောက်ခင် လှဲချမယ့်နေရာ အရင်ရှင်းသေးတယ်လား။ချစ်စရာလေး။